Ungalikhetha njani igama elifanelekileyo labalinganiswa bethu boncwadi | Uncwadi lwangoku
Ungalikhetha njani igama elifanelekileyo labalinganiswa bethu boncwadi
UCarmen Guillen | | Iincwadi, Ezahlukeneyo
Kwakhe kwenzeka kuwe ukuba udibane nomntu, azazise ngegama lakhe kwaye ucinga ukuba elo gama alihambelani kwaphela nembonakalo yakhe? Kum amaxesha ngamaxesha, ngokunyaniseka, kwaye yinto kuthi abo bakholelwayo abanokuyiphepha abalinganiswa boncwadi kwiinoveli, kumabali amafutshane okanye kolunye udalo loncwadi
Ku indalo yoncwadiNgokungafaniyo nobomi bokwenyani, sihlala sinomsebenzi esifuna ukuwubhala engqondweni ekuqaleni. ukumiselwa, ixesha kunye neempawu zabalinganiswa abathile. Kubomi bokwenyani, kwelinye icala, into yokuqala esiyikhethela abantwana bethu ngamagama kwaye, ekuhambeni kweminyaka, ngokuthe ngcembe sifumanisa ubuntu babo. Ukuthathela ingqalelo oku, kuyacetyiswa ukuba ube neempawu ezichazayo eziya kuphawula ikhondo lobomi boncwadi lomntu ngamnye kwaye ukhethe igama.
En Uncwadi lwangoku, Siza kukunika uthotho lweengcebiso ukuze amagama abalinganiswa bakho boncwadi Banomtsalane kwaye bafikelela kumfundi phantse ngokungaphezulu okanye ngaphezulu kunakwibali elixelwa ngabo.
Iingcebiso zokukhetha igama elifanelekileyo
Musa ukukhetha igama lothando oludlulileyo, ukuthanda ubuntwana / ubutsha ... Khetha igama elimele ngokufanelekileyo iinjongo zomlinganiswa oza kuliphatha kwibali loncwadi olibhalayo. Umzekelo, ukuba yindoda enobuntu obomeleleyo, obunomtsalane kunye nempumelelo yomsebenzi / yeshishini, kungcono ukumbiza ngokuba nguHéctor okanye uDamián kuno-Eustaquio okanye uGervasio (nangona uthanda izinto, imibala…).
Ayingawo onke amagama ekufuneka ebenobuqhophololo okanye engaqhelekanga. Ngamanye amaxesha sihlala sikhangela amagama ekunzima ukuwabiza kodwa athi emva koko akhunjulwe ngenxa yokunqaba kwawo, ... ... Ngale ndlela ndiza kuphulukana nobunyani.
Amagama aqhelekileyo asemthethweni njengayo nayiphi na ... Kutheni ungabizi umlinganiswa wethu uAna okanye uMaría? Mhlawumbi kungenxa yokuba ngamagama aqhelekileyo? Musa ukubadelela! Igama eliqhelekileyo linokumisela ubunzima beempawu.
Awunyanzelekanga ukuba "ubhaptize" bonke abalinganiswa bakho ... Abanye babalinganiswa bakho banokuchongwa kuphela ngamagama abo okuzibiza okanye ngeempawu zabo zomzimba: umntu othintithayo, oqhwalelayo, ophembayo, njl.
Ungasebenzisa isichazi magama ... Njengabanye ootata bexesha elizayo abakhangela kwizichazi magama ngamagama abantwana babo, nina njengababhali ninokwenza okufanayo ukuba nifutshane ngezimvo. Ungalibali ukuba incwadi iphantse yafana nomntwana osinike ubomi ...
Ke ngoku, loluphi uphawu lomntu owukhumbulayo ngaphezu kwalo lonke igama? Ucinga ntoni njengomfundi kunye nombhali ezinokuba zezona ziphambili ekukhetheni igama elilungileyo loncwadi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Ungalikhetha njani igama elifanelekileyo labalinganiswa bethu boncwadi
IBhetelehem Montero sitsho
Andisoze ndimlibale uCamilo Canegato.
Phendula Belén Montero
Kuya kufuneka sicingisise ngemvelaphi kwaye singabizi mlinganiswa ovela kwimvelaphi yaseMalaga kunye nosapho uWilliam ngaphandle kwesizathu ... Kubonakala kulula xa sifunda iincwadi, kodwa ekugqibeleni, njengoko usitsho, kufana nokuthiya umntwana!
Iincwadana ezi-5 zoncwadi lolutsha kuzo zonke izinto ozithandayo.
"Umtsalane", inoveli yokuqala kaSusana López Rubio